Ahoana ny fomba hidirana amin'ny Adobe Creative Cloud FREE ara-dalàna?
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Creative Cloud MAIMAIMPOANA
CREATIVE CLOUD MAIMAIMPOANA
Te hahazo rindrambaiko rehetra avy amin'ny Adobe Creative Cloud MAIMAIMPOANA ve ianao? Jereo ireto fomba ara-dalàna sy tohana ara-teknika ireto amin'ny fampiasana fampiharana Adobe nefa tsy mandoa famandrihana. Vakio bebe kokoa momba ny fomba fitahirizana vola sy hahazoana fihenam-bidy tsara amin'ny vokatra Adobe rehetra.
Mampalahelo fa tsy azo atao ny mampiasa Adobe Creative Cloud maimaim-poana amin'ny fotoana rehetra, voafetra io vanim-potoana io. Manana fito andro ianao manomboka amin'ny famoahana voalohany ny Adobe CC Free Trial. Na izany aza, ity fotoana ity dia tokony ho ampy hanapa-kevitra raha mila rindrambaiko Adobe rehetra ianao.
Tombontsoa maimaim-poana amin'ny Adobe Creative Cloud
Fitehirizana rahona lehibe
Fototra malalaka hianarana
Fanohanana ara-teknika mahafinaritra
Fifandraisana akaiky amin'ny fampiharana Adobe rehetra
Ny tranokalanao portfolio manokana
Inona no tokony hataoko amin'ny fiafaran'ny andrana maimaimpoana Adobe CC?
Mandehana any amin'ny tranokala ofisialy, ampidiro ny angona fanampiny ao amin'ny kaontinao mpampiasa ary havaozy ny famandrihanao.
JEREO NY ADOBE CC FAHASALAMANA FAHASALAMANA
Afaka manova ny drafitrao ve aho?
Eny, amin'ny fotoana rehetra, na dia efa nisafidy sy mampiasa famandrihana manokana aza ianao. Mifandraisa amin'ny fanohanana ara-teknika, lazao ny antony, miandry valiny ary toromarika fanampiny.
JEREO NY ADOBE PLANS
Ahoana raha tsy mandeha ny rindrambaiko sasany?
Hamarino ny fepetra takian'ny rafitra kely indrindra sy ny mombamomba ny solosainao. Raha toa ka tsy manampy izany, andramo ny manamarina ny PC-nao raha misy viriosy ary diovy izy ireo, raha hita. Manaraka, avereno apetraka tanteraka ny rindrambaiko rehetra. Tsy voavaha ny olana? Mifandraisa amin'ny fanohanana ara-teknika.
Afaka mahazo fihenam-bidy ve aho amin'ny Adobe Creative Cloud All Apps?
Eny, raha mpianatra na mpampianatra andrim-panjakana ofisialy ianao, dia manana tombontsoa sasany, amin'ny endrika fihenam-bidy 60% amin'ny fitambaran'ny drafitra voafantina.
MAhazoa fihenam-bidy ADOBE
Inona no tafiditra ao amin'ny Creative Cloud?
Fampiharana famoronana 20+, anisan'izany ny Photoshop, Illustrator ary Adobe XD + fampianarana tsikelikely, fitahirizana rahona 100GB, tranokala portfolio-nao manokana, endri-tsoratra premium.
Nahoana ianao no tsy tokony hampiasa Adobe CC voajirika?
Tsy maninona na misintona ny programa tsirairay avy ianao, ka manangona ny fonosana Creative Cloud feno na dikan-teny tokana - izany rehetra izany dia hitranga amin'ny alàlan'ny loharano torrent. Midika izany fa ho tandindomin-doza ianao sy ny PC-nao. Notanisaiko ireo olana 4 ambony mety hitranga rehefa mampiasa Adobe Creative Cloud crack:
Creative Cloud dia tsy hanohana endri-javatra fanampiny
Raha ny marina, Creative Cloud dia tsy sehatra tokana, miankina tanteraka amin'ny mpizara Adobe. Midika izany fa ho voafetra amin'ny fiasa ny dikan-tsarimihetsika alaina. Tsy ho afaka miditra amin'ny fitahirizana rahona ianao ary miasa akaiky amin'ny fampiharana. Noho izany, tsara kokoa ny mampiasa Fitsarana Lightroom version na andramana rindrambaiko hafa ao anatin'ny fe-potoana voafaritra.
FANAZAVANA ADOBE CC VERSION MAIMAIMPOANA
Asa tsy mety
Amin'ny fampiasana hack maimaim-poana amin'ny Creative Cloud, azo inoana fa hahita olana malaza ianao - lags sy karazana bibikely amin'ny rindrambaiko rehetra. Izany rehetra izany dia noho ny tsy nahazoan-dalana ny dikan-tenin'ny mpanonta anao, efa nokarakarain'ny mpijirika. Tapaka ny andalana amin'ny kaody loharano, noho izany, mahazo fampandehanana diso amin'ny programa ianao. Mba hisorohana ny olana toy izany dia mila mividy Adobe Illustrator ary programa hafa amin'ny suite.
Adino ny fitaovana vaovao & tolotra manokana
Isaky ny fahalavoana dia azo antoka fa miandry ny famoahana iOS vaovao hanavao ny iPhone-nao ianao ary hizaha toetra vaovao. Na izany aza, raha tsy tany am-boalohany ny iPhone-nao, dia tsy hahazo fanavaozana ianao, satria tsy hita ao amin'ny angon-drakitra ny laharan-tariby. Ny Creative Cloud dia miasa amin'ny fitsipika mitovy. Ny dikan-teny alaina tsy ara-dalàna dia manana laharan-tariby diso, izay midika zavatra iray - tsy misy fanohanana fanampiny.
ADOBE CC SPECIAL TOVERS
Ny tsy fisian'ny fanohanan'ny mpanjifa
Amin'ny maha-orinasa mendri-kaja azy, ny Adobe dia miantoka fa tsy hanana olana amin'ny fampiasana ny vokatra ny mpanjifa. Rehefa mividy amin'ny Adobe ianao dia manana fahafahana hanatona ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro. Hanampy anao hiatrika ny fahasahiranana rehetra momba ny fampiasana ny rindrambaiko izy ireo na hamantatra ny fomba fiasan'ny fitaovana samihafa. Rehefa nametraka Adobe Portfolio maimaim-poana na programa hafa avy amin'ny torrent, tsy misy afaka manampy anao raha sendra olana ianao.
Creative Cloud dia sehatra manerantany ary tsy misy safidy hafa amin'izany. Na izany aza, na eo aza izany, ny orinasa ACDsee sy Affinity Photo dia mandresy lahatra antsika ny mifanohitra amin'izany hatrany isan-taona. Tsy dia sehatra tery loatra misy fampiharana be dia be ireo, fa ny mpamorona dia manolotra dikan-tsary maromaro izay afaka manatanteraka saika ny asa rehetra azon'ny Adobe Creative Cloud.
MAMPISARA AFFINITY PHOTO ACDSEE
Interface azo zahana
Fitaovana mora ampiasaina amin'ny asa misy vokany
Fanitsiana loko mandroso
Fahafahana manodina rakitra avy amin'ny media data
Sarotra fianarana curve
Kely ny fitahirizana rahona
Ny orinasa ACDSee dia mamolavola tonian-dahatsoratry ny sehatra hijerena sy hitantanana sary, fanitsiana horonan-tsary ary rakitra RAW. Ny tonian-dahatsoratra avy amin'ny ACDSee dia manolotra asa fandaminana maro sy fitaovana ilaina amin'ny endrika plug-in fanitsiana lalina sy interface tsara azo zahana tanteraka.
Anisan'ireo endri-javatra mahasoa, tiako ny manamarika ny mpamoaka horonantsary. Ho fanampin'ny fitaovana avo lenta, azonao ampiasaina izany hifaneraserana amin'ny PC-nao - firaketana horonan-tsary avy amin'ny efijery nefa tsy miala amin'ny mpanonta. Tena mety izany satria mitsitsy fotoana be. Ohatra, miaraka amin'ity endri-javatra ity dia afaka mirakitra lesona ianao.
MAMPISARA AFFINITY PHOTO MAIMAIMPOANA
Mora kokoa noho ny vokatra Adobe
Fanovana sary maromaro
Ny tsy fahampian'ny fitaovana manafatra sy mitantana sary
Tsy misy fanitsiana arakaraka ny mombamomba ny family
Tsy misy fitahirizana rahona
Affinity Photo dia manolotra lisitra be dia be amin'ny fampiharana: Affinity Photo, Affinity Designer ary Affinity Publisher. Ny fampiharana tsirairay dia manerantany ary manana tombony manokana. Ny mampiavaka an'ity sehatra ity dia ny fividianana dikan-teny nahazoan-dalana avy hatrany. Tsy mila mandoa isam-bolana ianao, toy ny rehefa tapitra ny andrana maimaim-poana Adobe Creative Cloud.
Raha miresaka momba ny fiasa mahavariana isika, dia ny mpanonta sary no mitarika. Azonao atao ny mamerina amin'ny fomba matihanina ny sarinao, manambatra sary ho an'ny panoramas, mamorona fiantraikany HDR ary manao sary amin'ny borosy isan-karazany. Ao anatin'izany koa ny fitaovana avo lenta, ny fanovana sary batch, ny fiantraikan'ny endri-tsoratra ary ny fanitsiana ny fanodikodinana lens.
MAMPISARA PIXLR MAIMAIMPOANA
Fahaizana manitatra plug-in
Tsy mila fanamboarana mahery vaika
Mora kokoa noho ny Photoshop
Mitaky fidirana amin'ny Internet azo antoka ny fandehanana
Ny fampisehoana dia tsy tsara toy ny ao amin'ny Photoshop
Miaraka amin'ny Pixlr Editor, azonao ny fitaovana mitovy amin'ny Photoshop. Miresaka momba ny maranitra, ny blur, ny tabataba, ny haavony, ny saron-tava ary ny fiolahana aho, ary vitsivitsy amin'izy ireo. Azonao atao ny mahita ny sivana zavakanto andrasanao ary koa ny safidy optimization mandeha ho azy. Pixlr dia manome fitaovana misy borosy, famenoana, hajia, fifantenana ary fitaovana fanasitranana. Afaka mampiasa ity programa ity indray mandeha ianao Andrana Photoshop Tapitra.
Jereo bebe kokoa momba ny fomba fampiasana Photoshop maimaim-poana.
MAMPISARA RAWTHPAREE MAIMAIMPOANA
Fanodinana sary batch
RawTherapee dia loharano misokatra, fampiharana cross-platform. Miaraka amin'ny fitaovan'ny fanitsiana sary marobe sy ny multithreading, azonao atao ny manitsy ny fanodikodinana, manatsara ny loko, mamerina ny antsipiriany ao amin'ny rakitra RAW-nao sy ny maro hafa. Tsara ny manamarika fa ny mpanonta sary dia manohana ny fanodinana sary batch izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo safidy Lightroom mahery indrindra.
Jereo bebe kokoa momba ny fomba hahazoana Lightroom Free.
5. Alternative Adobe Illustrator: Inkscape
MAMPISARA INKSCAPE MAIMAIMPOANA
Azo ampiasaina ho plug-in Illustrator
Fahaizana fanodinkodinana mandroso
Betsaka ny sivana
Taloha endrika interface tsara
Inkscape dia fitaovana maimaim-poana hafa izay maka tahaka ny Adobe tanteraka. Ny boaty fitaovana dia manamora ny famoronana sy ny fanitsiana ireo rakitra scalable vector graphics (SVG) miaraka amin'ny fahaiza-manao fanodinkodinana avo lenta sy sivana marobe - na miasa na ara-kanto. Anisan'ireo fitaovana mahaliana, dia hanasongadina ny gradients grids sy ny interactive smoothing ny pensilihazo tsipika, ary koa ny mahatsikaiky ny contours. Tsara ny manamarika fa azonao ampiasaina ny Inkscape ho plug-in ho an'ny Illustrator.
Hijery misimisy kokoa momba ny ny fomba fanaovana Adobe Illustrator maimaim-poana.
MAMPISARA DAVINCI RESOLVE MAIMAIMPOANA
Fanohanana plugins isan-karazany
Fanohanana saika ny endrika rehetra
Sarotra ny mianatra
DaVinci Resolve dia fampiharana fanitsiana horonan-tsary matihanina. Tena tsara izy io ka ampiasaina rehefa mirakitra sarimihetsika lava sy fandaharana amin'ny fahitalavitra. Manampahaizana manokana amin'ny fanitsiana loko sy famokarana feo, DaVinci Resolve dia manana endri-javatra mahavariana, toy ny mpanonta curve sy ny kodiarana miloko voalohany. Izy io koa dia manohana ny fanaraha-maso ny famantarana ny tarehy, manome ny mpampiasa ny fahafahana milalao amin'ny lokon'ny hoditra, ny maso ary ny loko molotra.
Hijery misimisy kokoa momba ny ny fomba fampiasana Adobe Premiere Pro maimaim-poana.
MAMPISARA BLENDER MAIMAIMPOANA
Tsy mety amin'ny famoronana vokatra hita maso matihanina
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny alàlan'ny After Effects ny Blender. Miaraka amin'ny fanampiany dia afaka mamokatra sary mihetsika mahery vaika sy vokatra hita maso 3D ianao. Samy mampiasa ny fitaovan'ny texturing, ny modelin'ny particle ary ny composite ny mpankafy sy ny manam-pahaizana mba hamoronana asa manaitra miaraka amin'ny refy fanampiny.
Hijery misimisy kokoa momba ny ny fomba fampiasana Adobe After Effects maimaim-poana.
MAIMAIMPOANA Adobe CC Freebies
Efa nividy ny fampiharana Adobe Creative Cloud rehetra ve ianao? Dia tena mila plug-in isan-karazany ianao, na borosy ho an'ny Photoshop, preset ho an'ny Lightroom na LUTs for Premiere Pro. Azonao atao ny misintona sy manandrana azy ireo maimaim-poana, hanatsotra ny asa izy ireo ary hampihena ny fotoana lany amin'ny famokarana lahatsoratra.
Misintona Adobe Creative Cloud maimaim-poana ho an'ny Mac/Win
Raha toa ka manana fisalasalana ianao amin'ny fividianana famandrihana dia alao ny Adobe Creative Cloud Free Trial. Aza adino ny fahafahana hizaha toetra ny endri-javatra Creative Cloud, ary koa ny rindranasa rehetra misy amin'ity famandrihana ity.
Raha tokony télécharger dikan-ny fandaharana avy amin'ny antoko fahatelo loharanon-karena izay tsy azo itokisana, dia tsara kokoa ny misintona Photoshop CS6 maimaim-poana avy amin'ny tranonkala ofisialy. Amin'izany fomba izany dia hisoroka ny tsy fahombiazan'ny rafitra sy ny olana amin'ny lalàna ianao.
Tombontsoa Creative Cloud maimaim-poana
Safidy Creative Cloud maimaim-poana
Ampidino maimaim-poana ny Creative Cloud